GeForce Chiitiko Chekukanganisa Kodhi 0x0003 - Maitiro ekugadzirisa - Sei
Rongedza GeForce Chiitiko Chekukanganisa Kodhi 0x0003
Chiitiko cheGeforce isoftware suite iyo inobatsira kune vese varidzi veNvidia kadhi kadhi.Iyo software package inounza iwe zvese zvine chekuita nemifananidzo. Iko kuwedzera kukuru pakushandisa kushandiswa kwekadhi rako.Iyo Hardware inoda software kuti ichengetedze hutano hwayo uye kushanda kwakakodzera mukutarisa. Madhiraivha haasi iwo ega marongero aunoda mazuva ano.
Iyo GeForce Chiitiko software inounza akawanda akasiyana mabhenefiti petafura. Iyo yekukanganisa kodhi 0x0003 idambudziko rakajairika iro vazhinji vashandisi vatsva varikuzivisa. Zvinogona kunetsa pakushandisa kwako kwakatsetseka pane zvishandiso zvako. Muchirongwa ichi, tichakurukura zvakadzama nezve iyi nyaya.
Chii chinonzi GeForce Chiitiko Chekukanganisa Kodhi 0x0003?
Iyo yekukanganisa kodhi ichave iri pane ako ekuratidzira kana iyo Geforce chiitiko app isingamhanye. Vamwe vashandisi vanogona zvakare kutarisana nekanganiso 0x0001 pachinzvimbo. Iyo nyaya inogona kumuka kubva kune yekutanga-kumusoro maitiro. Chiitiko cheGeforce hachisi chekumanikidza kurodha asi chinounza zvimwe zvinhu patafura.
Vazhinji vatambi uye vhidhiyo vagadziri vanoiona iri yekufanirwa-kuve nebasa. Iko kukanganisa kunokuudza kuti 'Chinhu chakakanganisika; edza kudzorerazve PC yako. ” Icho chiitiko chinoitika chinogona kutungamira kune akawanda nyaya. Ndinovimba, tinogona kugadzirisa dambudziko iri nekutsvaga chinokonzeresa.
Nzira yekugadzirisa GeForce Chiitiko Chekukanganisa Kodhi 0x0003?
Multiple dzakasiyana nzira dzauri kushandisa dzaunogona kugadzirisa iyi nyaya. Muchirongwa ichi, tichakurukura nhanho dzinozoita kuti nzira yacho ive nyore kwauri. Pane mhinduro dzakasiyana dzaunogona kuyedza. Huwandu hwenyaya dzinogona kukuunzira nyaya nekuda kwepuratifomu iyi. Hedzino dzimwe dzenzira dzinoshandiswa dzaunogona kugadzirisa iyi Geforce chiitiko kukanganisa kodhi 0x0003.
Kumanikidza Kumisa Kunyorera:
Kumanikidza kumira mhinduro yekupedzisira kudambudziko iri. Vashandisi vanogona kushandisa nyore nyore ichi kubira kugadzirisa dambudziko nekukurumidza. Heano matanho ekuti ungaite sei zvakafanana.
1. Tanga mutariri webasa
Vashandisi vanogona kutanga maneja maneja kunyorera pamakomputa avo. Izvo zvinonyanya kushanda kuwana ese mashandiro ekuita. Iwe unogona kushandisa nzira pfupi yekhibhodi ye ctrl + shift + esc kutanga maneja webasa. Neimwe nzira, iwe unogona kubaya-kurudyi pabhara rebasa kuti uunze sarudzo.
2. End Geforce chiitiko chiitiko
Pane inoitwa maneja maneja, iwe unofanirwa kutsvaga iyo Geforce chiitiko. Kana iri kumhanya kumashure, unogona kuwana maitiro nekutsikisa pasi runyorwa. Sarudza maitiro uye wobva wadzvanya pamagumo ebasa sarudzo. Inowanikwa pazasi kurudyi rwechidzitiro.
Zvinoshamisa! Iye zvino unogona kumisa nyore iyo Geforce chiitiko application. Ndinovimba, panguva ino kutenderera, hauzotarisana nedambudziko rekuishandisa pakombuta yako. Vashandisi vanogona kumhanya nayo kuburikidza nehutongi rombo
2. Nvidia Telemetry mudziyo
Nvidia ane telemetry sevhisi inowanikwa papuratifomu. Icho chinodikanwa kune vese vashandisi vemakadhi emifananidzo. Kana sevhisi isiri kumhanya pakombuta yako, saka pane nyaya yemukati. Dambudziko rinogona kugadziriswa zviri nyore nekadiki diki. Aya matanho ekutanga manyorerwo pafoni yako.
Iwe unofanirwa kushanyira iyo yekumhanya sarudzo pane yako windows chishandiso. Vashandisi vanogona kudzvanya Windows + R kiyi kuitangisa pamakomputa avo.Ichavhura iyo yekumhanya sarudzo zviri nyore. Unogona kutaipa masevhisi.msc kuraira apa.
Vashandisi vanogona kudzvanya pane iyo Nvidia Telemetry sarudzo kuti utange nayo. Iyo ine iyo yeNvidia Ratidza mudziyo sarudzo pane komputa yako.
Unogona kumanikidza nesimba sevhisi nekushanda kwayo mushe. Sarudza iyo sarudzo uye tinya pakatangazve. Iyo PC skrini inogona glitch zvishoma asi ishande mushe mukati menguva yakati.
Zvinoshamisa! Icho chimwezve chiri nyore uye chinokurumidza kugadzirisa kweiyo GeForce chiitiko chekukanganisa kodhi 0x0003.
3. Gadziridza Madhiraivha
Vatyairi veNvidia vanoita basa rakakosha mukuona kuti iwe unokwanisa kukwidziridza iyo app. Kana chishandiso chako chiri kumashure kwekuvandudzwa, panogona kuita mashandiro uye nesoftware nyaya. Aya matanho ekumisikidza manyore madhiraivha pakombuta yako.
Iwe unofanirwa kushanyira iyo Nvidia webhusaiti pakombuta yako. Vashandisi vanogona tinya pane iyi link .
Zvinokutora iwe kuenda kune rekushandisa mutyairi yekumisikidza peji. Sarudza iyo kadhi yemifananidzo iri kumhanya kuratidza kwako. Iko kune runyorwa rwevose vepamutemo Nvidia mifananidzo makadhi aripo pano.
Unogona kudhawunirodha mutambo weGeforce, vatyairi vakagadzirira, kubva pachikuva ichi. Dzvanya pane bhatani rekutora kuti utore madhiraivhoni pane chako kifaa. Iyo setup ichazobvunzawo kuiswa kweiyo Geforce Zvakaitika. Vashandisi vakatarisana nechero nyaya vanogona kushandisa iyi setup kugadzirisa software.
Iyo yekuvandudza inogona kugadzirisa nyaya zviri nyore. Tinokurudzira kuti iwe ushandise iyi chikuva kuti uchengete yako kadhi remifananidzo riine hutano.
4. Mahwindo nyaya
Dzimwe nguva wako Windows muchina unogona zvakare kuve iwo unokonzera dambudziko. Vazhinji vedu tinowanzo dzivisa kuwana kuiswa kweyekuvandudza. Iyo software inogona kudhawunirodha otomatiki, asi isu tinopedzisira tasvetuka maitiro ekutanga. Kana izvi zvikaramba zvichiitika kwenguva yakareba, unogona kusangana nemimwe mibairo yakakomba.
Mhinduro iri nyore kurodha pasi uye nekuisa iyo yekuvandudza pane komputa yako. Vashandisi vanogona kudzvanya pane marongero kuti vaone kana paine chero akamirira ekuvandudza. Iyo yekumba chidzitiro pane yekugadzika tebhu inokuratidza maitiro ekuichengeta ichimhanya.
5. Dzorera Network
Nhau dzeNetwork inyaya hombe kune vashandisi vazhinji. Izvo zvakakosha kugadzirisa iyi network nyaya kuti ive nyore kuwana. Heano mutungamiri wedu pamaitiro ekusetazve netiweki pakombuta yako. Matanho acho anotevera -
Vashandisi vanofanirwa kumhanyisa iyo yekuraira Prompt kuti vatange kushanda pane iyo reset maitiro. Vashandisi vanogona kutanga iyo CMD application nekutsvaga pane yekutanga sarudzo. Iwe unofanirwa kuimhanyisa mune yemaneja modhi.
Vashandisi vanogona kuseka network yavo papuratifomu nekutaipa uyu murairo - netsh Winsock reset. Ichagadzirisa zvese zvese zvako zvegadziriro. Vashandisi vanofanirwa kuisa mapassword eWiFi uye imwe data kubva pakutanga.
Iye zvino unogona kuyedza kumhanya iyo Geforce chiitiko application zvakare.
Isu tinokurukura zvimwe zviri nyore kushandisa zvigadziriso tichishandisa chikuva ichi. Vashandisi vanogona kuyedza izvi uye vawane mhinduro dzakanakisa. Pane mhinduro dzakasiyana dzekugadzirisa dambudziko rakajairika. Geforce chiitiko chekukanganisa kodhi 0x0003 chiitiko chinowanzoitika. Izvi zvaive zvese zvigadziriso zvataikwanisa, kupfupisa kuburikidza nechinyorwa chino. Edza ivo kunze uye utiudze kuti ndeipi yaive mhinduro yako.
Sei Kuwana HBO Zvino Mudzidzi Discount?
Blink XT2 Ongororo - Yakakodzera Wireless Kunze Kamera?
maitiro ekuwana mahara robux pakombuta
yemahara anime masosi english subbed
mukutsvaga ... (tv series) zvikamu
akanakisa mawebhusaiti ekuti utarise kana wabora
maitiro ekuudza kana airpods 2 ari enhema
tarisa emahara bootleg mafirimu online kutenderera